Ukukhangela kunye nezwi le "Bosch" (inqaku le-2 ye-3) - I-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, i-Broadcastaster ye-NAB Show Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » Okufumaneka » Ukukhangela kunye neNgcaciso ye "Bosch" (inqaku le2 le-3)
UTher Welliver njengoHarry Bosch endlwini yakhe ebhekiselele uLa ebusuku, umzekelo omhle Boschifilimu yomdlalo we-classic black.
Inqaku lokuqala kulolu chungechunge lubonisa indlela, njengokuba iincwadi zeBosch zakwaMichael Connelly zenza isithethe somoya onzima, ophekiweyo onobuchopho baseMelika owenziwe ngu-Raymond Chandler noDashiell Hammett, ngoko i-Amazon Prime Video Bosch Uchungechunge lwethelevishini luqhubeka lubukeka bumnyama, bubukeka bubukeka befilimu ye-classical black. Kwaye ababini abantu abanomdla wokuqonda ukuba i-Black ijonga i-DPs yeSihlanu, uMichael McDonough (ASC, BSC, AMPAS) kunye noPatrick Cady (ASC), bobabini bahluke kwiichungechunge.
UMcDonough, owavuma ukuba udliwano-ndlebe naye, waqala ukwenza i-cinematographic for such film directorors as David MacKenzie, uRodrigo Garcia, uTerence Davies, uStephen Frears, uMichael Radford noLawrence Kasdan. Kwakhona wayeneentsebenziswano ezininzi kunye nomfundi wakhe wangaphambili we-NYU uDebra Granik, obalaseleyo I-Bone's Bone, eyafumana ezine Award Academy Award Ukutyunjwa okubandakanya umfanekiso omhle. Ukwengeza kwi Bosch, UMcdonough uye waba yi-DP Downton Abbey kwaye Umoyike Abafileyo Abahambayo.
UMcDonough wachaza indlela ahamba ngayo Boschbhakabhaka. "Inkalo ethile Bosch esiye sasebenza kuyo yiLa ebusuku, "watsho. "Kukho uvakalelo oluthile kwisixeko esibuyela kwiifilimu ezifana ubushushu kwaye Yobambiswano kunye nomnqweno ongenamandla wokukhanya kweso sobusuku kwesi sixeko esitshintsha ngokukhawuleza sibe yi-LED yokukhanya. Sisebenza kanzima ukugcina loo mvakalelo yamehlo amaninzi embala kunye neentlobo ze-neon eziza no kuziva ebusuku. Sisebenze kwakhona ebumnyameni bemixholongwane kunye nangaphandle kwiiminyaka kwaye sivuma ingxolo enokuza kunye nokusebenza kumanqanaba okukhanya okuphantsi ukwenzela ukuphucula loo mvakalelo yobungqina. Sijonge kakhulu kwimbali yomnyama yeso sixeko kunye nokubonakaliswa kwayo kwiSithuba seNine xa sasisebenzisa kakhulu iindawo zakudala kwindawo yedolophu. "
Ngenkcazo yesihlanu, iqela lagqiba kwindlela eyahlukileyo. "Kunyaka ophelileyo, sasiye sathonywa kakhulu I-French Connection ngokumalunga nokubunjwa, kunye nomqondo wokuqwalasela nokuqwalasela ohamba kunye nebali lethu eliphambili lexesha elidlulileyo, "uMcDonough wathi kum. "Kukho ixesha elisoloko libonwayo, eliphakanyiswa yiempendulo zependulo, ezenza njengemimoya yethu kwinqanaba elifanelekileyo.
"Ngexesha lesithandathu, sashintsha ukusuka kwi-RED Dragon ukuya kwi-RED Weapon kunye ne-Monstro sensor. Ngoku sitsho i-6K kwiziko le-5K elivumela ukhuseleko olubonakalayo lwabasebenzisi, kwaye ngoku sisebenzisa i-8: ukuxinwa kwe-1 ukwenzela ukuba isithuba siphele siphendule kakhulu into efana neyethu xa sisebenzisa iDragons kwi-5K kunye ne-4K extraction. Ukubeka iliso kwi-set-to-set is done using two Sony I-PVM254 25 "Iindlebe ze-OLED. Sisebenzisa i-LUT yethu kwiisaziso ngokusebenzisa i-switcher kunye ne-Odyssey 7Q Plus i-monitor / rekhoda ezibambelele kwi-36 LUTs kwaye zenza njengabaqapheli bethu boMbala.
"Sisebenzisa i-LED enje ngoku njengoko sisoloko sisezindaweni ezintathu okanye ezine kuyo nayiphi na imini, kwaye sizithoba malunga needolophu usebenzisa amaloli esitatyambo, kunye nefuthe lokugqibela kunoma yikuphi ukulungiswa, njengokukhanya kwamehlo okanye ukuvala ngokuqhelekileyo kufumaneka ngeeyunithi ze-LED ezixhasayo. Ngobusuku obungaphandle, sisoloko sisebenzisa ii-sodium zangempela kwiindawo zorhwebo eziqhutywe kwiindawo zokukhanyisa okanye kwi-condors. Kanye nokuba sizakuxuba i-tungsten kunye ne-HMI kwaye iipakethe eziqhelekileyo ze-gel zingabandakanya umphunga we-industrial or cyan. "
Ndaphinda ndicele uMcdonough malunga nokusetyenziswa kombala wokubhala kwi-post-production ukufezekisa Boschngeleko ekhethekileyo. "I-Red Raw footage-Red Wide Gide Log3g10-iqhutyelwa kwiWarner Bros. UkuFomfa Umfanekiso Ukufanekisa. Ama-dailies adluliselwa kwi-MTI Cortex kunye ne-LUTs ukusuka kwisethi isetyenziselwa ukudala umfanekiso weRe Rec 709 kunye ne-LUT 'ebhaka'. Sirekhoda kwi-6K kunye ne-5K extraction kunye ne-8: ukuxinwa kwe-1, ukuvumela indawo yokhuseleko lomsebenzisi wekhamera, ukuvumela indawo yokuhlala, kwaye xa kuyadingeka ukwandisa isibalo, sisebenzisa yonke indawo yesithombe se-6K. Iifayile ze-DNX ze-36 zenziwe ngokuhlela kunye ne-LUTs ezisetyenzisiweyo kunye ne-Synced Sound ngoYesu Borrego.
"Umbala wemifanekiso uScott Klein uyadlula ngokusebenzisa i-LUTs yethu njengesikhokelo. I-LUT ezisekwe zidalwe ngaphezu kweenyanga ezidlulileyo zonyaka. UScott, kunye nomncedisi uAra Thomassian osebenzela uMlingo woMnyama waseDi Vinci. Ukugqithiswa kokugqibela kokugqibela kwenziwa ngumvelisi olawulayo uPieter Jan Brugge kunye nokuba yeyiphi ye-DPs, mna okanye uPatrick Cady, ekhona. Omnye ube 'Ukubeka iItrans' kunye nomnye 'Umbala wokugqibela.' Sihambisa kwi-SD-Rec709 Prores422HQ kwi-UHD. Ukupasa kwe-HDR kwakhona kwenziwa-Rec2020PQ-ilawulwa nguScott. Wethu Bosch Iqela leposi leMveliso uMark Douglas, uMphathi wePosisi iTahah Geist, kunye noMququzeleli uErika Shea ukhangele izinto ngokugqithiseleyo kwaye axhaswa kwiWarners ngumphathi weprojekthi uMichael Holland. "
Ubininzi be Bosch lifakwe kwiindawo eziphambili ngokuchasene nezixhobo zesandi (into ephawulekayo yinto yokuzonwabisa eqinisekisayo hollywood kwisikhululo samapolisa esichazwe ngokugqithiseleyo kwiichungechunge). Kodwa kwakukho elinye ixesha eliqakathekileyo Isiqendu ezintlanu apho kwakufuneka i-studio ebekwe, ingaphakathi lendiza encinci apho uHarry Bosch elwa khona nokufa kunye neengqungquthela ezimbini kwiNgxenye 8 "iNtabeni yeNsindiso." UMcDonough wenza iinkcukacha malunga nokuqulunqwa kwaloo nto . "Ekuhambeni kwangaphambi kokuveliswa, sasibalekela kwinqwelo-moya yaseTwin Otter kwaye sasijikeleza izibonda kwiindawo ezahlukahlukeneyo ezijikeleze uLwandle lwaseSalton ukuze sivalelwe isenzo esiza kuthunyelwa kuso kwisikolo. Ukusekwa ngokwayo kwakumdlalo ochanekileyo kwisalathisi-moya. Kwakubalulekile ukuba sivakalelwa ngathi silapha, sizama ukugcina ibhalansi njengoko idiza ijikeleze kwaye sizama ukubamba indawo ngeekhamera eziphathekayo.
"Isethi yayisisigxina ngokupheleleyo kwaye iqhutywe kwi-gimbal ekwakheni ukunyakaza kwaye, ukwenzela ukuba ezinye zeendawo zekhamera zibekwe, sinezigaba ezungeze iifestile ezingakwazi ukuzibuyisela zona kwaye zivumele ikhamera ukuba iphume njengoko ifunekayo kwaye usinike ithuba elincinane lokusebenza. Sifake i-T12 kwinqanaba lekhwele lokukhwela ukunyusa ukuhamba kwelanga malunga nokujika okunamandla kunye neebhanki ze-fuselage. "
Ekubeni uninzi lwazo Bosch lifakwe kwindawo, elinye iqela elibalulekileyo leqela liyintloko yomphathi uPaul Schreiber, owathetha nam malunga neminikelo yakhe kwimiboniso. U-Schreiber waqala ukuqala njengendawo yokuhlola eSikhicago, kodwa njengoko wathi, "Ndanduluka ngaphaya los Angeles kwi-1994 inyanga, ukujonga izinto. Ungaze uhambe. Ukuxhamla kwiziganeko ezizodwa ukuya kwiivenkile, kumabonakude nakwiimpawu, ndihlolisisa, ndifuna uphinde ndihlasele-ikakhulukazi eSouth California ndizama ukufumana indawo ezifanelekileyo ezithintela i-chord kunye neskripthi, njl.
U-Schreiber wandihamba ngendlela yokunyathela ngamanyathelo omsebenzi wakhe. "Yinto eyenza umdlalo wokufuna umdlalo ofuna i-estichetic senssibility-cinematic composition; ukugweba ukusebenza-uhlahlo lwabiwo-mali, ukuvumela, ukulungiswa kwempahla yabasebenzi, izixhobo kunye nezithuthi; nolwazi lwe-geography, i-demographics, ukucandwa, ukuqonda kwimbali-indlela umzi uphuhliso ngayo; qoqosho; kwengqondo-ukufumana imvume; kunye nengqwalasela ebalulekileyo kwishedyuli yokuvelisa. Kwaye kwambi kwesinye ifumana umthamo onempilo womlingo kunye / okanye inhlanhla.
Into yokuqala endiyenzayo iyayihoxisa zonke izinto endazidweba kwaye ndafunda iskripthi. Njengoko ufunda incwadi, amagama athetha umfanekiso engqondweni yam. Emva koko izinto ezikhankanywe ngasentla ziqala ukukhaba ukudlala. Ngamanye amaxesha umqambi wemveliso, umlawuli, umlimi uya kunika isikhokelo, ngokusoloko kuchaza isitayela okanye ixesha kunye nenye into encinane. Emva kwamaxesha amahlanu Bosch, Ndinengqiqo enhle yento wonke umntu ekhangeleyo kwaye iya kusebenza ntoni.
'Ukukhangeleka kulandelayo. Ukufumana nokufotoza okunyanzelayo kunye enokwenzeka ukhetho lulandelayo. Ezinye iindawo zifunyenwe ngokusetyenziswa kweGoogle Maps, ezinye zivela kumava adlulileyo, ezinye zivela ekuhloliseni iimimandla ezithile. Ingxoxo, iingxoxo, iziphakamiso, kunye nenhlanhla zisetyenziselwa ukufumana imvume yokufotela indawo eneendawo zokufowunelwa. Vetting, vetting, vetting ... Ukuba ayifuni ukukhutshwa ngaphandle kweli nqanaba, ndibonisa iifoto. Imveliso eyahlukileyo ineendlela ezahlukileyo zokubheka ngaluphi umgangatho, kwaye ngubani owenza ukhetho. Ngamanye amaxesha kubonakala kukubambisana, ngamanye amaxesha kuncinci. "
Ngokubhekisele kwiziphi iimpawu azijonga kwindawo, uSchreiber uchaze iimfuno eziyimfuneko kwindawo ethile. "Ingaba indawo ixhasa ibali kunye nabalinganiswa. Ingaba ihambelana nomfanekiso wam owenziwe kwithuba xa ufunda iskripthi? Iingoma ezikhangayo-ngaba kukho umboniso okhangayo? Sisoloko sithobela, kwaye asinalo ixesha apha. Iingozi-azipheliyo: Iziphazamiso ezibonakalayo ezinokubamba ingqalelo kwizinto ezingaphakathi ifilimu isakhelo. Ukuba kukho ikhaya elingaqhelekanga elingaphambi komntu oza kuba 'liqhawe' ikhaya, kunokuphazamisa umbukeli. Sifuna ukuba ziqhutywe kwiphepha leskripthi. Nantoni na engasisondeza kule njongo ingaba lukhethi olubi. Abavakalisi-ukuba bakrekhoda ingxoxo yomdlalo, oku kulandelayo kungabangela ingxaki: Iziza ezakhiwayo ezikufutshane, iindawo ze-junkyards, izixhobo zokulawula izilwanyana, izikolo, izithuthi, okanye umqhubi wepilisi ekwakhiweni kwesitoreji se-Banana Republic. umlawuli uRob Reiner ukuba amemezele, 'Yintoni esi sihogo eso ?!' Ukuzonwabisa ngokuqinisekileyo. Kwaye kukho iimvume. Ukuqhagamshwa kwendawo yinyani yehlabathi, kungekhona isandi. Ukuxhomekeka kwintsebenziswano ukulawula indawo yokufowunelwa. Ukufumana imvume yomlinganiselo wokuvelisa ukuhlala kwipropati yangasese kunye noluntu kungaba ngumsebenzi, kwaye ngamanye amaxesha, akunakwenzeka. Ngaphambi kokutshala ixesha kunye nomnqweno ekukhethweni, ndicinga ukuba kunokwenzeka ukuba uphumelele. "
Ndabuza uSrreiber ukuba wayisebenzisa nayiphi na isofthiwe esithile ukugcina iingingqi zeendawo ezikhethiweyo zokusebenzela indawo. Waphendula wathi: "Hayi." "Ndiyilungele iifayile ezifana nekhabhinethi yokufaka; iifolda, kunye neqela lamafolda aphantsi. Ingqondo yam isebenze kakuhle nge geography kwaye ndiqhele ukukhumbula kakuhle apho kukho into. Ndicinga ukuba uphendlo olungundoqo lwamagama luya kundinceda, kodwa andizange ndibe nexesha. Iifestile eziliqela zeGoogle Maps zivame ukuvula kwideskithophu kwantoni na. I-app elula yokuchithwa kwe-batch kwii-zillions zezithombe-rhoqo ii-500 imifanekiso ngosuku oluhamba ngekhamera. Ukubetheka kwezithombe kusetshenziselwa ukugqithisa, kodwa sisuka kulo. Nangona iipenki zibukeka zilungile, ixesha lidla kakhulu. Endle ngexesha elide, ndiya kukhupha i-Sun Way endleleni. "
Amazon Prime Video AMAPA ASC Bosch BSC Yobambiswano Downton Abbey Umoyike Abafileyo Abahambayo HEAT i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw LUTs UMichael Connelly Bomvu SoftAtHome, MStar, iCES2017 Sony Iintetho kunye nemisrya I-French Connection BuTeknoloji I-Ultra HD Forum Abazalwana beWarner	2019-06-07
Previous: I-Chesapeake Systems idibanisa u-Amy Lounsbury ukuya kwi-Team of Southwest
next: Umbono wekhompyutheni & Iimpawu ezibonakalayo Iinjineli eziyintloko